काठमाण्डौ । नब्बेको दशकतिर बहुचर्चित प्रेमगीत ‘माया मेरी माया’ को प्रत्यक्ष प्रस्तुति टुबोर्ग ओपन सेसन्स् सिजन २ मा सार्वजनिक भएको छ । मूलतः ‘क्रसरोड्स’ ब्यान्डले प्रदर्शन गरेको उक्त गीत च्यानल आरबिट्ररीद्वारा सञ्चालन हुने ‘टुबोर्ग ओपन सेसन्स् २’ मा सञ्जय श्रेष्ठले संगीतकार बिनायक शाहका साथमा प्रदर्शन गरेका हुन् । सन्...
काठमाण्डौ । नेपाली संगीत क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिभाशाली प्रस्तुतिहरु पेस गर्दै आइरहेको दी एलिमेन्टस ब्याण्डले टुबोर्ग ओपन सेसन्स् २ मा आफ्नो लोकप्रियगीत ‘अल्लारे’ को प्रस्तुति दिएका छन् । टुबोर्ग र च्यानल आरबिट्ररीद्वारा सञ्चालन हुने टुबोर्ग ओपन सेसन्स् २ एक युट्युब सिरिज हो । जसमा विभिन्न प्रसिद्घ कलाकारको स्टुडियोमा प्रत्यक्ष...
काठमाण्डौ । गायक, गीतकार तथा कम्पोजर कालीप्रसाद बाँसकोटाको लोकप्रिय गीत ‘माझी’ को प्रत्यक्ष प्रस्तुति टुबोर्ग ओपन सेसन्स् सिजन २ मा सार्वजनिक भएको छ । टुबोर्ग र च्यानल आरबिट्ररीद्वारा सञ्चालन हुने टुबोर्ग ओपन सेसन्स् २ एक युट्युब सिरिज हो । जसमा विभिन्न प्रसिद्घ कलाकारको स्टुडियोमा प्रत्यक्ष रेकर्ड गरिएको प्रस्तुतिहरु पेश...
काठमाण्डौ । चलचित्र ‘साहो’ ले दुई दिनको अवधिमा ३२० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्न सफल भएको छ । ब्लकबास्टर चलचित्र ‘बाहुबली’ का नायक प्रभास र नायिक श्रद्धा कपूरद्वारा अभिनित चलचित्र साहोले यतिखेर बक्स अफिसमा धुम मच्चाइरहेको छ । चलचित्र साहोले प्रदर्शनमा आएको पहिलो दिन शुक्रबार १६७ करोड रुपैयाँ कलेक्सन गरेको थियो । चलचित्र साहोले...
काठमाण्डौ । एनसेल प्रा.लि.ले आयोजना गरेको एनसेल सर्ट फिल्म कम्पिटिसन अन्तर्गत कमल सुवेदी र उनको समूहले बनाएको ‘बुवा’ फिल्मले पहिलो पुरस्कार पाउन सफल भएको छ । यो प्रतियोगिता थिम बुवा रहेको थियो । बुवाको मुख हेर्ने दिनको अवसरमा एनसेलले साउनको तेस्रो साताबाट ईच्छुक सर्ट फिल्म निर्माताहरुबाट प्रतियोगितामा समाबेश हुन आह्वान भएको थियो...
काठमाण्डौ । विश्वमा बढी आम्दानी गर्ने अभिनेताको सूचीमा भारतीय कलाकार अक्षय कुमार चौथो स्थानमा पर्न सफल भएका छन् । फोब्र्स पत्रिका हालै सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ मा विश्वमा सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने अभिनेताको सूचीको अक्षय कुमारले चौथो स्थान बनाउन सफल भएका हुन् । यो सूचीको पहिलो नम्बरमा ख्यातिप्राप्त अभिनेता डबेन जनसन । उनी...
काठमाण्डौ । सोमस्र्वीद्धारा आयोजित कार्यक्रम ‘सिङ विथ सुशान्त’मा सुशान्त केसीसँगको संगीतमय साँँझले काल्म रेष्टुरेन्ट एण्ड बारमा युवा र संगीतप्रेमीहरुको ठूलो भीडलाई आकर्षित गर्यो । उक्त भीडले सुशान्त केसीको ‘मायामा’ र ‘गुलाबी’ जस्ता लोकप्रिय गीतहरुको आनन्द लिँदै गायकसँगसँगै झुम्दै, गुनगुनाउँदै, नाच्दै ‘गुलाबी’ गीतलाई...
-ताराप्रसाद फुल्लेल पूँजीबजार थला पर्यो, किन हुन्छ खेल ! धैर्यताले बाँध तोडे, बाहिर आउला झेल !! नीतिनियम बनाएर, काम समयमै सक्ने ! निर्णय गरि सकेपछि, जाल नगर रोक्ने !! हामी सधै लागिराछौं, व्यवस्थित गरौं भनी ! बजार धेरै खस्किसक्यो, गुम्यो धन पनि !! कुरा सुन्छौ काम गर्दैनौ, किन पार्छौ पछि ! तलव अनि भत्ता खान्छौ,पदमा बसी–बसी !! नियामकहरूबीचमा...
काठमाण्डौ । सोमस्र्वी(SOMERSBY) एप्पल साइडरले युवामाझ लोकप्रिय तथा चर्चित गायक सुशान्त केसीलाई यही साउन १६ बाट लागू हुने गरी एक वर्षको लागि ब्रान्ड एम्बेष्डर घोषित गरेको छ । सोमस्र्वी र सुशान्तको सहकार्य नेपाली युवाहरुमाझ प्रचलित स्फुर्तिदायी पेय “सोमस्र्वी एप्पल साइडर” र युवावर्ग माझ सांगीतिक क्षेत्रका प्रिय र प्रख्यात गायक...
काठमाण्डौ । फोब्र्सले यस वर्ष तयार पारेको धेरै कमाउने संसार १ सय सेलिब्रिटीको सूचीमा भारतबाट एकजना अक्षय कुमारमात्र पर्न सफल भएका छन् । सुरुमा बलिउडमा एक्सन किङबाट परिचय बनाएका अक्षयले त्यसपछि रोमान्टिक र अहिले हास्यप्रदान चलचित्रमा बढी देखिन थालेका छन् । उनी फोब्र्सले सन् २०१९ बढी पारिश्रमिक लिने सेलिब्रेटीको सूचीमा अक्षय...
मदन पुरस्कार गुठीले मदन पुरस्कार–२०७५ का लागि सात वटा कृतिलाई श्रेष्ठ सूचीमा छनोट गरेको छ । छनोट भएका कृतिमा सानु शर्माको ‘एकादेशमा’, बिन्दु शर्माको ‘ओक्कल दोक्कल पिपल पात’, कुमार नगरकोटीको ‘ज्ञ’, छुदेन काविमोको ‘फातसुङ’, महेश थापाको ‘मरीचिका’, योगेशराजको ‘रणहार’ र ध्रुव सापकोटाको ‘विचारको लाश’ छन् ।&nb...
काठमाण्डौ । सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सिनेमा हलहरूले वर्षमा आधा दिन नेपाली चलचित्रका लागि कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने एउटा कानुनको मस्यौदा बन्ने क्रममा रहेको बताएसँगै त्यसले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ। यसको खुलेर समर्थन गर्नेमा धेरैजसो नेपाली चलचित्रकर्मीहरू छन् भने चलचित्र वितरक तथा हल सञ्चालकहरूले यसको...
‘प्रकाश, छोराले तिम्रो तस्विरमा म्वाइँ खान्छ,अनि मलाई पटक पटक रुवाउँछ !’
-बीना मगर ‘प्रकाश ! हाम्रो प्रेमको चिनोले बुवा भन्छ, तिम्रो तस्वीरलाई म्वाइँ खान्छ, अनि मलाई पटकपटक रुवाउँछ !’ प्रकाश तिमी हिलोमा फुलेको कमल थियौ । हिलोमा फुलेको सुन्दर कमलको फूललाई दुनियाँले टिपेर हातमा खेलाउने चाहना राख्छन । टिप्न नसकेपछि ढुङ्गाले हानेर धुजाधुजा पार्न खोज्छन, तिमी थियौ त्यस्तै । नेतृत्वलाई सिध्याउन गरिएका लाखौं...